राष्ट्रिय गान पशुपतिमा होइन्, कालापानी र सुस्तामा बजाउ |
राष्ट्रिय गान पशुपतिमा होइन्, कालापानी र सुस्तामा बजाउ
डा. श्याम नेपाल , ६ आश्विन २०७६, सोमबार ६ आश्विन २०७६, सोमबार
राष्ट्रिय गान एउटा शान हो, मान हो । राष्ट्रिय भावनाले ओतप्रोत भएको आत्मिक शक्ति पनि हो । कसैले पनि यसलाई उपेक्षा गर्नुहुँदैन, यसमा राष्ट्रप्रेमका कुराहरु पर्दछन ।
प्रथम विश्वयुद्ध वा द्धितीय विश्वयुद्ध होस् या शीत युद्ध होस्, सबैमा आ–आफ्नो देशको शान, मानको लागि राष्ट्रिय गानले नै अगुवा गरिएको हुन्छ । राष्ट्रिय गान साधारणतया स्थायी हुनु पर्दछ ।, राष्ट्रिय झण्डा र राष्ट्रिय गान भनेको राष्ट्र कै प्राण हुन । नालापानीको लडाइँमा होस् अन्य समयमा, नेपालीले नेपाली झण्डा र समय–समयमा गाइने राष्ट्रिय गानको मर्यादा अत्यन्त उच्चकोटीले राख्ने गरेको इतिहास साक्षी छ । नेपाली जनता जे जस्तो अवस्थामा रहे बसेता पनि आफ्नो शान र प्रतिष्ठालाई राष्ट्रिय गानले प्रतिनिधित्व गरेको हुन्छ ।
भारतको राष्ट्रिय गानले त्यहाँ रहेका प्रान्त र प्रान्तीय जातिलाई वर्णनात्मक शैलीमा राष्ट्रिय गानमा समेटेको छ भने बंगलादेशमा जमीनको वर्णन गरिएको छ । नेपालमा राष्ट्रिय गान समय समयमा फेरबदल हुने गरेका छन् । हालको राष्ट्रिय गान सबै देशवासीलाई एक ढिक्का हुने सन्देश दिन्छ । साथै, नेपाल वीरहरु हुन् भन्ने सन्देश दिन्छ । मैले विगत छ दशकमा जानेर वा नजानेर तीन वटा गीत राष्ट्रिय गान भनेर गाउन पुगेको याद छ । म बालक हुँदा गाउँछ गीत नेपाली ज्योतिको पङ्खा उचाली भन्ने राष्ट्रिय गान गाइन्थ्यो । हामीले डाँडाकाँडा अथवा भोजपुरको कुनै गाउँमा गाउथ्यौँ । त्यसले राष्ट्रप्रति भक्तिभावना आउँदथ्यो । त्यसपछि राजाको प्रशस्ती हुने प्रकारको राष्ट्रिय गान पनि उसैगरी अनुशासित भएर गायौँ । अबका दिनमा गणतन्त्रको स्थापना कालपछि पूरै देश र देशवासीको प्रशंसा र वीर गाथा गाएको राष्ट्रिय गान भएकोले झन श्रद्धा र भक्ति हुने भयो । यस अर्थमा राष्ट्रिय गानको उच्च मर्यादा हुनुपर्दछ भन्ने मेरो ठम्याइ छ ।
तर हामीलाई के ध्यान हुनुपथ्र्यो भने राष्ट्रिय गान गाउँदा समय, अवस्था, कार्यक्रम अन्य कुराको पनि ख्याल राखिनु पर्दछ । राष्ट्रिय समारोह, दैनिक कार्यको थालनीमा वा कार्यक्रमको बिसर्जन इत्यादीमा त्यो कार्यक्रमको गरिमा हेरेर मात्र राष्ट्रिय गान गाउनु नै राष्ट्रिय गानको यथेष्ठ मर्यादा हुन आउँछ । विवाह, ब्रतबन्ध, छेवार, मन्दिरमा प्रार्थना इत्यादि कुरामा राष्ट्रिय गान गाउनुु हुँदैन यो तर्कको कुनै विषय नै रहेन् ।
दुर्भाग्य ! यतिबेला राष्ट्रिय गान जस्तो साझा सम्पत्तिलाई विवादमा ल्याउने प्रयास भएको देखियो । त्यो के भने पशुपतिको सन्ध्याकालीन गंगा आरतीमा राष्ट्रिय गान गाउनु पर्ने । यसलाई कसै कसैले गाउनुपर्ने या नपर्ने भन्ने जस्ता विवादास्पद बहस आएको देखिन्छ । यस विषयमा विवादमा ल्याउनु कति पनि तर्क देखिँदैन ।
क्रिश्चियनहरुले चर्चमा, मुसलमानहरुले मश्जिदमा, बौद्धहरुले गुम्बामा, जैनीले जैन मन्दिरमा यसरी राष्ट्रिय गान गाउने प्रणाली बनाएका छैनन् । अब आएर एकाएक पशुपतिको गंगा आरतीमा राष्ट्रिय गान गाउने प्रणालीबाट राष्ट्रिय भावना जगाउने भन्ने कुराले सामान्य भक्तले आध्यात्मिक चिन्तन गर्नुपर्ने ठाउँमा मातृभूमिको चिन्तन गराउँदा नराम्रो नभए पनि राम्रो पक्कै होइन । भगवनाको स्तुती पाठ गर्दा राष्ट्रिय गानको प्रचलन राष्ट्रिय गानलाई नै विवादमा ल्याउनु हो । हामी राष्ट्रिय गानलाई विवादरहित बनाउँछौ भनी दृढता व्यक्त गर्दछौँ । तर विवाह, ब्रतबन्ध, मन्दिरको प्रार्थना वा अरु कुनै नितान्त धार्मिक कार्यक्रममा राष्ट्रिय गान गाउनु भनेको राष्ट्रिय गानको अवमुल्यन गर्नु हो । नेपाली मात्र नभएर भारत, बंगलादेश, बर्मा र अन्य देशका हिन्दुहरु पनि पशुपतिनाथको दर्शन र गंगा आरतीमा उपस्थित हुँदा राष्ट्रिय गानको मर्यादामा प्रशासनिक झमेलामा पर्दा तिर्थालुहरुलाई अति भन्झटिलो हुनजान्छ । अब उप्रान्त पशुपति आर्यघाटमा लाश जलाउँदा पनि राष्ट्रिय गान गाएर मात्र लाश जलाउनु भन्दा यो के समय सुहाउँदो उर्दि हुन्छ ? यसै गरी राष्ट्रिय गानको मानमर्दन हुन नदिन कटिबद्ध हुनु पर्दछ ।
राष्ट्रिय भावनामा कसैले सम्झौता गर्न सक्दैन । कालापानीमा राष्ट्रियता चाहिएको छ कञ्चनपुरमा, लिम्पियाधुरामा, सुस्तामा राष्ट्रिय भावना बढाउने प्रशस्त ठाउँहरु छन् । तराईका कुनै कुनै जिल्लाहरुमा नेपाली भाषाको बिकल्पमा खोजी भइरहेको ठाउँमा राष्ट्रियता चाहिएको छ । देशको सीमावर्ती इलाकामा बढ्दै गरेको अपराध रोकथाम गर्न राष्ट्रियता चाहिएको छ । सुगौली सन्धीपछि गुमेको नेपाली जमीनको बारेमा सोचाइ हुनु पर्ने हो राष्ट्रियताका सवालमा । सुगौली सन्धीको ४५ वर्षपछि सन् १८६० को नक्सा अनुसारको सीमा अतिक्रमण भएको छ भने दक्षिणी सीमानामा राष्ट्रिता चाहिएको छ ।
सारांशमा यथास्थानं तत् तद्भावः भने जस्तै ठाउँ अनुसारको भाव प्रकट गर्नुपर्ने भएकोले पक्कै पनि चर्चमा, मश्जिदमा राष्ट्रिय गान गाउन कर लगाइँदैन भने पशुपतिको रमाइलो धार्मिक मेलामा प्रशासनिक झन्झट पारेर जथाभावी राष्ट्रिय गानको परिपाटीले धार्मिक जागरणलाई खलल पुर्याउन खोजेको तथ्य श्रद्धालु भक्तजनमा अत्यन्त चर्चाको विषय बनेको छ । धार्मिक श्रद्धालुहरुले राष्ट्रिय गानप्रति नकारात्मक धारणा गरेको हैन । बरु प्रयोगकर्ताले जबर्जस्ती बेला न कुबेला बाजा बजाउन लगाई बाजाकै उपहास गरेका हुन् ।
अन्त्यमा पशुपतिमा गंगा आरतीमा जाने भक्तहरुले राष्ट्रिय गानमा चिन्तन गरे जस्तो राष्ट्रिय गानको अवमूल्यन हुन नदिन र पशुपति गंगा आरतीको मर्यादामा आँच नपुर्याउन उत्तिकै मात्रामा हामीबाट पनि प्रयास हुनुपर्दछ भन्ने मेरो सोचाइ छ ।
राष्ट्रिय खेलाडीहरुलाई सम्मान गर्ने तयारी